Kufamba bhegi Vagadziri & Vanotengesa - China Kufamba kwebhegi Factory
Masaini emaoko, bhegi rekufambisa-pfupi, bhegi rinotakura
Nyika haizi yekuona, asi yekufamba. Iyo yakatsiga uye yakajairika mafashoni bhegi yakagadzirwa yakasarudzwa yepamusoro-isina kureruka isina mvura isina jira, iyo inopfeka inopesana, yakakwirira-density, inofema uye yakagadzikana. Iyo yakakura-kugona dhizaini inogona kuchengeta nhamba yakakura yezvinhu zvakadai seyezvipfeko zvemunhu, makomputa, nharembozha, maambulera, nezvimwewo, uye yekumberi zipper bag inokwanisa kuchengeta nhare, makomputa ematehwe, maketani emakiyi uye zvimwe zvinhu kuti zvive nyore kushandisa chero nguva.
Yakakura mhezi yekufambisa yekufamba yakachena mhezi bhegi tsvimbo yakasungirirwa bhandi mitambo bhegi
Isu tinotenda kuti vafambi vanogona kutora ndege dzakawanda dzakasiyana siyana mukati mehupenyu hwavo. Nekudaro, isu takagadzira iyi yekupedzisira makabheji yakatenderwa pakeji, saka inogamuchirwa nevakawanda ndege muUnited Kingdom, United States uye Europe.
Casual pfudzi pfupi-kureba-kuremerwa chikwama bhegi rakazvimiririra shangu chinzvimbo chinofamba bhegi yakaoma uye yakanyoroana kuparadzanisa mitambo yekusimbisa chikwama
Yakareruka uye inotakurika: Iyo bhegi yekufambisa yemitambo yakagadzirwa neyemhando yepamusoro oxford machira, anonzwa akasununguka, akareruka, asina kupfeka, kukwenya-kudzivirira uye kusadzivirira mvura. Yakagadzirirwa nehombodo huru-yekumakura chikwama, bhegi rakanyorova uye rakaoma rekuzvimiririra uye bhegi rakapatsanurwa bhutsu, iro rinogona kuchengeta bhegi rimwe nerimwe. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvekufambisa.
Nhabvu yemitambo yakasimba bhegi isina mvura yekureruka bhasiketi rakakura rinokwenenzvera bhegi rakakura
Yakagadzirwa yakakura-kugona mukati mekatikati, inogona kuchengeta uye kutakura zvipfeko, nharembozha, makomputa, charger, nezvimwewo, zvakanyanya kugadzikana kushandisa uye zviri nani manejimendi ezvinhu. Iko kushandiswa kwehupamhi hwemhando yepamusoro, maviri zip musoro kugadzira, kusvinudza kwakatsetseka nekuvhara, hazvisi nyore kutu. Inonyaradza kutakura tambo, yakanaka uye inoshanda. Yakasimba-yakasimba uye yakasimba purasitiki bhandi kubatanidza, yakasimba kwenguva refu.
Isingaremi isinganyoreki inotakurika yekufambisa bhegi varume nevakadzi bhegi bhegi hombe rakazvimirira shangu chinzvimbo
Bhegi rakanaka rekufambisa, huwandu-hwekuremerwa nehuno hwebhegi rakakosha. Kureba kweruoko rwemavara ehombodo yekufambisa inoenda kunzira yose kusvika pasi pehombodo, ichishandura simba rinokweva kusvika hafu yemuviri wehomwe, iyo isiri yakasimba uye yakasimba asi inowedzerawo chikwama chekubereka.